मारवाडी समुदायका पौरखी पुरुष शर्मा
[2011-06-04 오후 8:47:00]
१९७४ सालको कुरा हो; भारतको दार्जीलिङ सहरमा ठूलो आगोलागी भयो।त्यस अग्निकाण्डमा पं. राजाराम शर्माको कपडाको पसल पनि डढेर सखाप भयो । त्यस घटनापछि पं.शर्मा टाट पल्टे । अनि उनी टेक्ने न समाउनेका भए । दिनचर्याका लागि उनी जागीर खान वाध्य भए । तर उनले पाएको जागीरले उनका स्वास्नी, छोराछोरी पाल्ने अवस्था न्यून भयो । त्यसपछि उनी सानोतिनो भए पनि व्यापार व्यावसाय समाउने हिसावमा मौजुद भए । त्यस अठोटले उनले खुद्रा व्यापार खोले । तत्अनुरूप उनले दार्जिलिङ भेकका गाउँघरमा कपडा लगेर बेच्ने काम समाय । तर त्यसबाट पनि उनको विहानबेलुकाको छाक टरेन । त्यसपछि उनी साझे व्यापारमा लागे र झनै ऋणमा डुबे।अनि उनको त्यो साझे बाझेमा अनुवाद भयो। त्यस पछि भौंतारिएर उनी नेपालको इलाम पसे ।
इलामको फिक्कलमा पं.राजाराम शर्माले कपडा पसल नै थापे । साथै त्यहाँ उनले अर्को खुद्रा पसल पनि थापे ।अनि क्रमशः उनले त्यहाँ अलैँची र चिया पसल पनि सञ्चालन गर्न थाले । तर बजार सानो भएकाले त्यसबाट पनि उनको घरधन्दा चलेन । त्यसपछि उनी श्रीमती सरस्वतीदेवी र एउटा छोरा मेघराज शर्मा लिएर कामकै खोजीमा धरानतिर लागे ।
मेघराज शर्माको जन्म १९७९ सालमा इलामको फिक्कलमा भएको थियो । घरको अत्यन्तै अत्यासलाग्दो आर्थिक कारणले उनी आफन्तको घर पञ्जावको लुधियाना पुर्याइए । उनले त्यहीं नै प्राथमिक शिक्षा पढे ।
शर्मालाई पुनः नेपाल नै ल्याइयो । अनि उनी आफ्ना बुबालाई सघाउने अभ्रि्रायमा जुटे । परिणमस्वरुप उनले पढ्दै व्यापार गरे । त्यतिन्जेलमा उनले संस्कृत, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयमा ज्ञान पनि आर्जन गर्दै गए । साथै उनले मन, वचन र कर्मले आफ्ना बुबाको सेवा गरे । त्यति खेर उनले ऋणमा डुबेका आफ्ना बुबालाई भनेका थिए 'बुबा ! नआँत्तनिु होस्, हामी उठ्न सक्छौं ।' आफ्ना छोराले जति नै हौसला दिए तापनि कहिले पनि व्यापार नगर्ने र्सतमा पं.राजाराम शर्मा चाहिं हरिद्वारतिर लागे । त्यसपछि मेघराज शर्माले घरको सारा व्यवहारको नाम्लो भिरे । तर उनले हरेस खाएनन् । क्रमशः आफ्ना बुबाको पेसामा उनले आफूलाई अडिक बनाएर नै छाडे । उनको व्यापार विस्तारै सप्रन पनि थाल्यो । अनि उनले नेपाल तथा भारतको दार्जीलिङमा आफ्ना बुबाले खाएको ऋण तिर्दै हिँडे । उनले आफूलाई सक्षम बनाए पछि उनी समाजसेवामा लागे । त्यहाँ पनि उनी विस्तारै फक्रन थाले ।
बीस वर्षीय पण्डित शर्माको बिहे पण्डित चिरञ्जीवीलाल शर्माकी छोरी जानकीदेवीसँग भएको थियो । उनीहरूबाट सुरेशकुमारको जन्म भयो । पं.शर्माको धरानका कालीप्रसाद श्रेष्ठसँग घनिष्टता थियो । श्रेष्ठ धनी थिए तर मनकारी पनि थिए । त्यसैले श्रेष्ठले पण्डितलाई धरानमा नै एउटा घडेरी दान दिए।पण्डितले त्यहीँ घर बनाए।अनि उनी झनै सहज भएर समाजसेवामा लम्के ।
पं.शर्मा समाजसेवाका भीम थिए । उनी काम गरेर थाक्तैन थिए । उनको योजना पनि व्यवहारिक हुन्थ्यो । उनी कुराभन्दा काममा विश्वास गर्थे । उनको जाँगर प्रायः शिक्षा विकासमा केन्द्रित हुन्थ्यो । त्यसैले धरानको पब्लिक हाइस्कुल, शिक्षा निकेतन, पिण्डेश्वर संस्कृत विद्यालय, शारदा बालिका विद्यालय, महेन्द्र क्याम्पसआदिको स्थापना र सञ्चालनका लागि पनि उनको योगदान स्तुत्य रहृयो । त्यस भेकको धार्मिक कार्यमा पनि उनको बिर्सिन सक्नुको भूमिका रहृयो । साथै उनी सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यापार प्रवन्ध समितिको अध्यक्ष पनि भए ।
शर्माले धरानमा विविध समाजसेवा गरे । त्यहाँबाट फट्का हानेर उनी विराटनगर पनि पुगे । त्यहाँ पनि उनले मुलरुपमा धर्म, शिक्षा र समाजसेवा नै समाए । शर्माले विराटनगरमा सत्यनारायणको मन्दिर बनाए ।त्यस मन्दिरको उनी आफै पूजारी भए । उनले विराटनगरमा स्कुल, कलेजको स्थापनामा भूमिका खेले । विराटनगरमा श्रीकृष्ण गोसेवा सदनको गौशाला स्थापना गरेर उनले अर्को ऐतिहासिक काम गरे । साथै उनले यहाँ गुरुकुल बनाए । उनको योगदानले उनी धेरैका प्रिय भए । उनी शिष्ट रुपमा व्यापार व्यावसायमा पनि लम्कदै गए । उनको महानताको त्यहाँ धेरैले जय मनाउन थाले । त्यसैले उनी पूर्वाञ्चलका विभिन्न व्यापार वाणिज्यको प्रमुख भएर पनि बसे । साथै शिक्षणसंस्था र धार्मिकसंस्थाहरुमा पनि उनी र्सवसम्मतिबाट प्रमुखमा छानिइरहे ।
सुरुमा नै पं.शर्माले नेपाली साहित्य भण्डार स्थापन गरेका थिए । उनी आफै पनि लेख्थे र अरुलाई पनि लेख्न प्रेरणा दिन्थे । उनी नेपाली साहित्यमा लेखनाथ पौड्यालप्रति विशेष वफादार थिए । त्यसैले उनले 'तरुणतपसी'को भावनुवाद गरेर २२३ पृष्ठको ठेली हिन्दी भाषासाहित्यको क्षेत्रमा पनि पुर्याए । उनले अनेकौँ लेखरचनाको आविष्कार गरे । उनका लेखन र सम्पादन गरेर एक दर्जन कृति प्रकाशनमा आए । पं.शर्मा नेपाली साहित्यका निष्ठावान स्रष्टा थिए । त्यसैले उनकै अध्यक्षतामा २०५१ सालमा विराटनगरमा वृहत् नेपाली साहित्य सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
शर्मा नेपाली साहित्य, समाजसेवा र राष्ट्रिय चिन्तनमा डुब्दाडुबदै थला परे । उच्च रक्तचापका कारण उनको हृदयगती बन्द भयो । अन्ततः २०६० साल पुस २८ गते उनी विराटनगरमा स्वर्गीय भए ।